bogga boodhari | welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com
Gabaygan wuxuu ka mid yahay gabayada ugu caansan gabayada Cilmi Boodhari. Gabaygan wuxuu marka hore Cilmi ugu jawaabayaa dadkii Cilmi caashaqa kula yaabsanaa. Wuxuuna u sheegayaa caashaqu in aanu layaab lahayn ee yahay wax caadi ah oo Ilaahay aadmiga ku abuuray weligiina uu soo jirey. Dadkana waxa lab iyo dhedig looga dhigay inay is cajebiyaan. Marka xigtana wuxuu dadkan la yaabsan ku lahaa muu gabadhan yar iska ilaawo oo mid kale meelahaa u doonto, in aanay arintu sidaa u sahlaneyn. Wuxuuna u sheegayaa in aanu iska saari karayn caashaqan ku habsadey Ilaahay oo ka saara mooyeene. Waxuu leeyahay wax kastana sameeyey oo wax aan ku bugsado oo iga saara ma hayo, xataa wadaadadii ayaa iga saari kari waayey. Cilmi wuxuu leeyahay waxa keliya ee dawada ii ahi waa anigoo Hodan hela, xaalka aan maanta ku jirona waxaa ka roon anigoo dhinta. WAA KAN GABAYGII CAASHAQ
Cilmi Ismaaciil wuxuu gabaygan kaga cabanayaa dhalinyaradii ay isku beesha ahaayeen. Cilmi wuxuu u sheegayaa nimankaas in xaalkiisu uu aad u xun yahay, habeeniyo iyo maalina uu feker iyo walaac ku jiro. Wuxuu isku metelayaa sidii qaalin (neef geel ah oo yar) oo uu cudurka dhugatada la yidhaahdaa ku dhacay oo geelii gaadhi waayey xanuun dartii oo iska daba luudaya. Wuxuu leeyahay cidna ma raaco oo cidladaan keligey wareegaaleysanayaa halkii aad ii arxami lahaydeen ee aad wuxuun igula daali lahaydeen ayaabad igu cayaarayesaan oo iga riwaayadeysanaysaan ,,,,,,,,,,,, WAA KAN GABAYGII (DHADHAB)
AltaVista Gabaygan waa gabay fariin ah oo Cilmi u dhiibay nin ay ilmo adeer ahaayeen u socday magaalada Berbera oo ay joogtay gabadhii uu jeclaa Hodon Cabdi Walanwal. Cilmi waqtigaas wuxuu joogaty miyiga iyo Hawd. Wuxuu gabayga ku bilaabayaa duco uu ninka fariinta qaadaya u ducaynayo dabeedna wuxuu muujinayaa sida aanu habaynkii u seexan ee uu weli Hodan xageeda usoo hanqal taagayo. Wuxuu leeyhay waxaad ku tidhaahdaa hadaad is leedahay Cilmi wuu ku ilaawey ama wuu kaa hadhay, in arainku aanu caynkaas ahayn gabadh kale oon la shakeekaystaana ay iga reebban tahay. Ugu danbayntii wuxuu odhanayaa haddii aan caano geel kuugu sii dhiibi lahaa oo hadiyad aahaan ugu diri lahaa, kulaylkaa leefaya oo intaad jidka kusii jirtaabay xumaanayaan ee talow maxaan inantii Hodan kuugu dhiibaa? WAA KAN GABAYGII (HILAAC)
Lycos Gabaygan waxaa la sheegay in Cilmi tiriyey ka dib markii gabdho aad iyo aad uga damqaday dhibka Cilmi haysta iyo sida maalinba maalinta ka danabaysa ay dhibaatadu ugu sii waynaanayso Hodanna ay adag tahay siduu u helaa, ayaa waxay u yeedheen Cilmi waxayna u sheegeen inay jecel yihiin inay wax la qabtaan. Balse nasiib daro meel qalad ah ayey doonayeen inay wax ka qabtaan iyagoo Cilmi u sheegay in gabadh allaale gabadhii kale ee uu doonayo ay u keeni doonaan. Nin meeli u cadahay meeli ka madowe Cilmi mid ayuunbaa laabtiisa degtey, laabina laba u la’. Markaa Cilmi gabdhihii tixdan yar ee gaaban ayuu ugu jawaabay. Wuxuu yidhi: WAA KAN GABAYGII (LAACDAN)
Midnaay hays ku kay lurin qalbigu laba jeclaan waaye
8 comments on “bogga boodhari”
wanaaga nolosha on February 2, 2009 at 1:18 pm said:
HADII AAD JACAYL JILAYSO WALI JACAYLKA ILAHAY MA,ISKU DAYDAY INAAD JECLAATO !
Sideen Allaah uuga baqdaa, uugana cabsadaa
Allaah ka cabsigu waa darajo aad u sareysa oo aanu gaadhi karin qofka ku dheehan xumaanta kana fog wanaagu, sidaa daraadeed ayeynu soo sheegney iney tahay ( Allaah oo wuxuu ku faray la fuliyo, macaasidiisana laga dheeraado, xuduudiisana lagu eekaado).
Hadduu qofku ogaado sharafta taqwada iyo heerka ay gaarsiisan tahay waxa la gudboon inuu is weydiiyo; sidaan ku gaarayaa darajada taqwada?.Arrinkaasi waxa uga jawaabaya Imaamka tarbiyadda Quluubta ee Al-Qazali oo yiri ( Waxa uu ku jiraa wanaaga Naftu inaad isu taagto una diiddo macsiyo kasta, kana ilaaliso waxaan faa’iido ugu jirin haddaad sidaa sameyso Allaah waad ka baqatey, Ishaada , dhegtaada, carabkaaga, qalbigaaga, calooshaada, xubintaada taranka, iyo xubnahaaga kaleba waad dhawrtey waxaanad ku xakameysey taqwada alle. Sidaa awgeed baabkanu waa mid dheer sharaxiisu, waxaana odhaahdeedu lagama maarmaan tahay Ninkii doonaya inuu Allaah ka cabsado ha dhawro xubnahan shanta ah oo ah seeskiisa, waana ( Isha, dhegaha, carabka, qalbiga iyo caloosha) Haddii la ilaaliyo xubnahan waxa xaqiiqo ah in intooda kalena toosayaan, waxaanu gudanayaa taqwada iyo Allaah ka cabsiga dhammaantii).Manhajka caabudayaasha ee Sheekh Qasaali/ 76-77.
Mawduuca dhuuxiisu waa halkan oo ah xubnahan qofka siduu u hoggaamin lahaa oo haddey hagaagaan ah hagaagga qofka iyo liibaantiisa ifkan iyo aakhiraba, kuwaas oo ka kooban shantaasi xubnood, waana kuwaa xukuma xubnaha qofka intooda kale, waxaynu si kooban ugaga jawaabi doonnaa shan qodob oo Ruuxii raacaa uu kaga magan galayo xubnahan sharkooda, khayrkoodana helayo, cibaadadoodana gudanayo;-
1- Inuu qofku ilaahay jeclaado.
2- Inuu qofku qalbigiisa dareensiiyo inuu allaah daalacanayo kana xishooda Alle xishood xaqiiqo ah.
3- Inuu ogaado ama is dareensiiyo dhibaatada ay leedahay macaasidu iyo danbigu.
4- Inuu barto iskuna dayo siduu qofku hawadiisa uga xoog badin lahaa, naftiisana uga guulaysan lahaa.
5- iyo inaad ogaatid meelaha shaydaanku inaga soo galayo, sidoo kalana ka digtoonaatid tashwiishkiisa.
Taasi waa qodobada lagu ilaalin karo xubnahaasi shanta ah oo darsiga aynu ku soo qaadan doonno mid ka mida .
JACAYLKA IYO KALGACAYLKA ILAAHAY
Imaamka ibnul-qayim wuxuu leeyahay (Jacaylku waa geed qalbiga ku yaalla, xidhiidhkiisuna waa is hoosdhigga cidda la jeclaado, jiridiisuna waa barashadiisa, laamahiisuna waa kacabsashadiisa, caleemihiisuna waa ka xishoodkiisa, midhihiisuna waa adeeciddiisa, waxa geedkaas lagu waraabiyaa waa xuskiisa. Haddaba, haddii jecaylka mid ka mida intaasu ka maqnaato waa kala dhiman yahay) Beerta kuwa Allaah jecel/409.
Waxa kale oo Caalimka Ibnu Rajab yiri: (Ilaahay jacaylkiisu waa laba darajo, midi waa farac waajib ah ” waana inaad jeclaatid Allaah jacayl keensanaya inaad jeclaatid waxa uu waajibka ka dhigay, necbaatidna waxa uu xarimey, inaad jeclaatid Rasulkiisa uu fariinta innoogu soo dhiibey, kana hor marisid jeclaantiisa nafta iyo ehelkaba, jeclaatidna diinka uu inoo keeney, kana raali ahaatid isuna dhiibtid sharciga, sidoo kalana inaad jeclaatid Anbiyada iyo kuwii raacay jidkooda, waana inaad u cadhooto Gaalada “iyo danbiilayaasha”, Allaah dartiina ula coleytantid.
Darajada labaad, waa darajada ciidamada Allaah xagiisa u dheereeyey una dhawaadey, lana soo dhaweeyey waana ” inuu jacayku gaadho inla jeclaado waxa uu jecel yahay ka la jecel yahay, oo sunayaashu ka mid yihiin, lana karaahiyeysto waxa uu karaahiyeystey ka la jecel yahay, lagana raali noqdo xukunkiisa iyo qaddartiisa haba dhibto nafta amaba masiibo ha ahaatee”. Waxaana taas ku tusinaya xaddiiskii uu Allaah ku sheegey kuna yidhi:
(( Qofka iga colaadiya Wali waxaan ogeysiyey dagaal, addoonkayguna iiguma soo dhawaado shay xaggayga loogaga kalkacayl badan yahay waxaan ku faral yeelay, kamana suulo adoonkaygu inuu iigu soo dhawaado sunayaasha, ilaa aan jeclaado)).
labadaasi derajo ee jacaylku waxaynu raacin doonaa wasiilooyinka “Dariiqa”lagu gaaro jacaylkaasi oo ay ka mid tahay:
Waxay u dardaarantey haweeney kamid ahayd dadkii salafka wanaagsanaa ahaa wiilkeedii waxay ku tiri: ( Barta, caadana ka dhigta jaceylka Ilaahay iyo daacadiisa, waayo kuwa taqwada leh waxay xubnahoodu barteen daacada Allaah, waxaaney diideen wax kale, Haddii shaydaanku macsiyo amrana waxay ka leexataa xagooda, ayaguna waa diidaan).
Ilaahay ayeynu ka baryeynaa inuu ina waafajiyo jeclaantiisa, si aynu u gaarno taqwadiisa sharafta badan. Aamiin
Mukhtar on March 12, 2009 at 9:55 am said:
anigow ah mukhar abukar faragab marka hore waan idin mahad celiynaya asxabta dhalinta yar ee is ku holo ka qancinta dhaliyarada shekeyinka xisaha badan sida sheekada hodon iyo bodhri heesaha qoralka ah iyo dhaman waxi madaalo ah by
sheekh mardaadi on August 13, 2009 at 5:40 pm said:
jacaylku aa cajiib anba wuu ihelee ilaaw isii kaad iiqortay
asma cabdilaahi on August 13, 2009 at 5:41 pm said:
jacayl ayaa ihaya ooaan doonayaa wax ila taliyee ii soo duceeya in ilaahay isiiyo kaan jeclaaday aamiin
Saqani on March 30, 2011 at 9:23 am said:
Asc dhaman walahayga somaliga runti in wax la jeclado wa mado ilah nagu aburay 1 inad alah jeclata wa qasb hadan gabr ad gur lawadagto inad jeclatana denbi maha noloshuna jcl la an wax dhahana malaha
c.qani faraas on April 10, 2014 at 7:07 pm said:
cajiib ” jacaylka waa loo dhintaa hadii qalbiga mid qurux badani ka gasho
nuurka on July 2, 2015 at 12:04 pm said:
JACEYL RUUX AAN SOO MARIN U SHEEGA
alta on March 3, 2016 at 11:03 am said:
waa jiraa jacayl